| Facer စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Android Wear ရငျဆိုငျရ APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Facer စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မျက်နှာများ
Facer စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ APK ကိုရငျဆိုငျရ
Facer စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Android Wear & Tizen စမတ်နာရီများအတွက်အဆုံးစွန်လက်ပတ်နာရီကိုမကျြနှာကိုစိတ်ကြိုက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်ရငျဆိုငျရ။ Facer ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အနုပညာရှင်များကနေ2အခမဲ့နှင့်ပရီမီယံလက်ပတ်နာရီမျက်နှာများအပါအဝင်သင်သည်သင်၏ Android ကိုစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့သို့မဟုတ်ဂီယာ S3 / S15,000 စိတ်ကြိုက် & personalize ဖို့လိုအပ်သမျှကို, ပေးထားပါတယ်။ သင်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ပတ်နာရီမျက်နှာများအောင်နှင့်ဖန်တီးသူ tool ကိုသုံးပြီးကမ္ဘာကြီးကိုသူတို့နှင့်အတူမျှဝေနိုင်ပါသည်။ Facer သင်သည်သင်၏စမတ်နာရီမှသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင်ရောက်စေဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အရာရာကမ်းလှမ်း, default အဖြစ်မနေပါနဲ့။
FACER NOW ကဂီယာ S2 & S3 ကိရိယာများကိုထောက်ပံ့
ဂီယာ S3 & ဂီယာ S2 အသုံးပြုသူများအတွက် installation အကြံပေးချက်များ:
ကို Google ကနေ * Download & Install "Facer" App ကို App ကိုစတိုးဆိုင် Play
* သင့်ရဲ့ဂီယာ S3 သို့မဟုတ်ဂီယာ S2 က "Samsung ကဂီယာ" app ကို & ဘလူးတုသ်အားဖြင့်သင်တို့၏စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်သေချာအောင်လုပ်ပါသင့်ဖုန်းနှင့်စမတ်နာရီနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဖွင့်
သဖြင့် Samsung Galaxy App Store မှ * Download & Install "ဂီယာ S2 & S3 များအတွက် Facer အဖော်"
သင့်ရဲ့ဂီယာ S2 / S3 စမတ်နာရီပေါ်မှာ * Long ကစာနယ်ဇင်းနှင့်သင့်ကိုရှေးခယျြ watchface အဖြစ် "Facer" ကိုရွေးချယ်ဖို့ scroll
* သင့်ရဲ့ဖုန်းကနေ Facer App ကိုဖွင့်ပါနှင့် 15,000 watchfaces ကျော်နှင့်အတူအပြည့်အဝ Facer အတွေ့အကြုံကိုပျော်မွေ့သို့မဟုတ် www.facer.io/creator မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကျော် Facer ဖန်ဆင်းရှင်ကိုအသုံးပြုပြီးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီး
တုံ့ပြန်ချက် & troubleshooting
* သင်တို့သည်ငါတို့၏ app ကို & လက်ပတ်နာရီမျက်နှာများကိုအသုံးပြုပြီးမည်သည့်ကိစ္စများရှိခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်မကျေနပ်ဖြစ်ကြဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို ratings မှတဆင့်မကျေနပ်မှုဖော်ပြရှေ့တော်၌ကိုယ်ကဖြေရှင်းမယ့်အခွင့်အလမ်းပေးပါ။
* သင်က facer-support@little-labs.com တိုက်ရိုက်တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်
သင်တို့သည်ငါတို့၏လက်ပတ်နာရီမျက်နှာများခံစားနေတယ်ဆိုရင် * ကျွန်တော်အမြဲအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်တန်ဖိုးထား
15,000 WATCH, မျက်နှာများ
အခမဲ့နှင့်ပရီမီယံမျက်နှာများများအတွက်အကြီးဆုံးတစ်ခုတည်းဦးတည်ရာကို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းမှုအတွက်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသေး၏။ နောက်ဆုံး & လူကြိုက်အများဆုံးလက်ပတ်နာရီမျက်နှာများ Explore သို့မဟုတ်သင့်ခံစားချက်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလက်ပတ်နာရီကိုမကျြနှာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သစ်ကိုရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးပါ။
Tetris ™, Star Trek, Garfield, Ghostbusters, အမေရိကန်ဖေနှင့်ပိုပြီးများကဲ့သို့ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်ကနေပရီမီယံမျက်နှာများရာပေါင်းများစွာကိုရှာပါ။ ဒါကြောင့်အသစ်ကလက်ပတ်နာရီကိုမျက်နှာများအဘို့မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကဆက်ပြောသည်ခံရသစ်ကိုတံဆိပ်ရှိပါတယ်။
Facer သင်သည် Android Wear များအတွက်ရရှိနိုင်အလှဆုံးနှင့်ပြောင်းလဲနေသောမျက်နှာများကိုရောက်စေဖို့အရည်အချင်းလက်ပတ်နာရီကိုမကျြနှာကိုဒီဇိုင်နာများအနေဖြင့်မူလဒီဇိုင်းများ collection များကို curates ။
FACER နဲ့သင့် WATCH, မျက်နှာဒီဇိုင်နာ Publish!
စမတ်နာရီသုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာရောက်ရှိ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်ပတ်နာရီကိုမျက်နှာဒီဇိုင်းများဖန်တီး & Facer မှတဆင့်သူတို့ကိုထုတ်ဝေရန်လိုပါသလား? ဒီတော့လျှင်, ငါတို့သည် Facer-လက်မှတ်ဒီဇိုင်နာများကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်း join ဖို့အရည်အချင်းအနုပညာရှင်ရှာဖွေနေပါတယ်။ facerdesigners@little-labs.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်ပိုပြီးထွက်ရှာမည်
သင့်ကိုယ်ပိုင် WATCH, မျက်နှာစေ
သင့်ကိုယ်ပိုင်လက်ပတ်နာရီ https://www.facer.io/creator မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အစွမ်းထက် web-based အယ်ဒီတာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရ Make (သတိပြုပါ: အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအဘို့သင့်လက်ပ်တော့သို့မဟုတ် desktop ပေါ်မှာအမြင်) ။
* အကြီးစားထုံးစံဖောင် collection များကို
* Interactive မှနှင့် Animated ဒီဇိုင်းစွမ်းရည်
ဖာရင်ဟိုက်နှင့်စင်တီဂရိတ်ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ * မိုးလေဝသအခြေအနေများ
* ဘက်ထရီအဆင့်, အဆင့်ကောင်တာ, ဝိုင်ဖိုင် Indicator နှင့် Dynamic နောကျခံ
အားလုံး ANDROID WEAR Watch နှင့်သဟဇာတ
Facer မျက်နှာများကိုကြည့်နစ်ဆင်မစ်ရှင်, အရောင်အသွေးစုံ m600 မိုက်ကယ် Kors စမတ်နာရီ, Asus က Zenwatch 3, Moto 360 အားကစား, Casio WSD-F10, Tag ကို Heuer စမတ်နာရီ, Moto 360 1 & Moto 360 2nd မျိုးဆက်အပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ် Android Wear ကိရိယာများအားလုံးနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြ , Huawei က Android ကို Asus ကဇင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ 1 &2Sony ကစမတ်နာရီ 3, LG က G အန်းဒရွိုက် watch, LG ကထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းက Android လက်ပတ်နာရီ, LG ကမြို့ပြစမတ်နာရီ, Samsung ကဂီယာစမတ်နာရီပြီးပို, စောင့်ကြည့်
* Facer ဖန်ဆင်းရှင် & အဝန်း: www.facer.io
* Google + အဝန်း: https://plus.google.com/communities/107456884368395361653
* တွစ်တာ: https://twitter.com/GetFacer
* Instagram ကို: https://instagram.com/getfacer/
- Samsung က Active ကို2များအတွက် Added ထောက်ခံမှု
- အံဆွဲ Menu ထဲမှာတိုးတက်ကောင်းမွန်သောလက်ပတ်နာရီ detection နဲ့ဆက်ပြောသည်ဆက်သွယ်မှုညွှန်ပြချက်
- Misc ။ ဘာဂ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ရေး
62.54 ကို MB
Little က Labs က, Inc
ဓာတ်ပုံစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Wear ...